iCloud, Sawirrada Google, Flickr, iyo Amazon Cloud Drive: Xagee ku dhejiyaa sawirradayda? | Wararka IPhone
Wararka IPad | | Tartanka, iCloud
Ku keydinta sawiradeena daruurta waa wax si caadi ah u soo badanaya, kaliya maahan sahlanaanta inaad ku raaxeysan karto meel kasta oo ay uga mahadcelinayaan internetka iyo aaladaha mobilada, laakiin sidoo kale maxaa yeelay waa hab raaxo leh, dhakhso leh oo aad u fudud Nuqul amniga maktabaddayada sawir qaadista ah ee ka soo horjeedda dhacdo kasta oo qallafsan oo ku dhammaata darawgeena adag. Waxaa jira adeegyo badan oo na siiya akoonno bilaash ah si aan u soo dhigno sawirradeena iyo fiidiyowyadeenna, waxaana dooneynaa inaan falanqeyno afarta ugu caansan ee la yaqaan: Sawirka iCloud, Sawirrada Google, Flickr iyo Amazon Cloud Drive.
1 iCloud, raaxada iyo isdhexgalka ugu badan
2 Sawirrada Google, xafiiltanku waa inuu garaacaa
3 Flickr, nin weyn ayaa hoos u dhacay
4 Amazon Cloud Drive, mid aan rabo mana awoodo
5 Sawirada Google, inta ka hartay inta badan
iCloud, raaxada iyo isdhexgalka ugu badan
Apple waxay siisaa dhammaan isticmaaleyaasheeda xisaab iCloud leh 5GB oo keyd ah oo bilaash ah. Xogta laga helo codsiyadayada, nuqulada nuqul ee aaladahayaga iyo sawiradeena iyo fiidiyowyadeenna ayaa lagu keydiyay koontadan. Way fududahay in la fahmo in 5GB-kani ay aad u yar yihiin in laga fikiro sidii loo badbaadin lahaa maktabaddeenna sawir qaadista, oo xitaa ka yar haddii aan fiidiyowyo ku dhex jirno. Koontada bilaashka ah ee 'iCloud' waxaa loo isticmaalaa wax yar oo ka badan keydinta sawirrada aan ku qaadno iPhone-keena iyo in lala wadaago qaar ka mid ah asxaabta iyo qoyska, laakiin haddii aad runtii ka fiirsato isticmaalkeeda si aad u geliso maktabadda oo dhan, ficil ahaan waxaa lagugu waajibinayaa inaad bixiso awood dheeraad ah .
Waa run in qiimayaashu aysan sareeyn: € 0,99 bishiiba waxaad ku raaxeysan kartaa 50GB oo keyd ah, € 2,99 waxaad heleysaa 200GB iyo € 9,99 bishii waxaad heli doontaa ilaa 1TB oo awood ah, laakiin ma u qalantaa bixiso iyada? Sawirka iCloud wuxuu leeyahay faa iidada ah inuu sifiican ugu dhexjiro nidaamyada hawlgalka Apple. Sawirada macruufka iyo OS X sifiican ayaa loo fahmay, waana inaad kaliya habeysaa dhowr ikhtiyaar si maktabadaada oo dhan ay ugu wada jirto dhamaan qalabkaaga mobilada iyo kumbuyuutarrada Mac-da hal mar. Waxaad sidoo kale fursad u leedahay inaad u qaabeysid si aan macruufka ugu jirin dhammaan keydinta qalabkaaga, adigoo soo dejinaya kaliya nooca ku habboon xallinta shaashaddaada. Sawirada waxaa lagu soo rogay isla tayada kuwa asalka ah, waadna ku soo dagsan kartaa markasta oo aad rabto isla tayadaas, adoo haya dhammaan faahfaahinta. Si kastaba ha noqotee, waxaas oo dhan kuma qancinayaan inta badan dadka isticmaala ee doorta adeegyada kale ee bilaashka ah.
Sawirrada Google, xafiiltanku waa inuu garaacaa
Shirkadda Google ayaa billowday adeeggeeda cusub ee ay ku kaydinayso sawirrada iyo fiidyowyada daruurta sanad ka hor. Adeeggooda bilaashka ah ayaa waxay kuu ogolaaneysaa inaad keydiso dhamaan sawirada iyo fiidiyowyada iyadoon xadka lahayn, laakiin leh hal shuruud: dhamaan sawirada waa inay lahaadaan xalka ugu badan ee 16Mpx iyo 1080p videos. Sawiradaas iyo fiidiyowyadan ka sarreeya shuruuddan ayaa si otomaatig ah loogu beddelayaa cabbirkan si loogu soo dhejiyo server-yadooda. Haddii aad rabto inaad iyaga la soo dhejiyo oo la ixtiraamo qaabka asalka ah, markaa waxaad bixin doontaa akoon Google Drive ah, halkaasna soo jiidashadii ayaa luntay. Sawirro iyo fiidiyowyo aan gaarin xalka ugu sarreeya ayaa sidoo kale lagu cabirayaa server-yada Google, inkasta oo sida ay shirkaddu sheegtay uu noqon doono mid aan la aqbali karin adeegsadaha.
Google sidoo kale waxay soo saartaa su'aalo badan oo khuseeya arimaha gaarka ah, maxaa yeelay shuruudaha adeegeedu waxay muujinayaan in sawiradu adigaa iska leh, laakiin waxay xaq u leedahay inay isticmaasho markay u aragto inay ku habboon tahay, xitaa haddii aadan mar dambe adeegsan adeeggeeda, oo soo saaray waxyaabo badan muran markii hore. Iyada oo ay taasi jirto, codsigeeda loogu talagalay iOS iyo OS X, ku soo rarida maktabada sawirada Google Sawir waa ciyaar caruureed, oo waxay si aan kala go 'lahayn iskugu dhafanaysaa Sawirada loogu talagalay Mac, sidaa darteed sawirro kasta oo aad ku darto barnaamijka Apple waxaa si otomaatig ah loogu dhejin doonaa Sawirrada Google.
Adeegga Google wuxuu kaloo leeyahay shaqooyin aad u xiiso badan oo ka duwan kuwa kale, sida sameynta animations marka aad geliso sawirro badan isla daqiiqad isku mid ah, silsilado, albamyo iyo fiidiyowyo soo bandhig ah dhacdooyinka qaarkood. Tan waxaa sameeya Google oo si toos ah u falanqeysa alaabtaada oo kuu tusta si aad u go'aansan karto inaad jeceshahay iyo inaad keydiso ama haddii aad iska tuurto. Mar alla markii aad isku daydo, runta ayaa ah in mararka qaarkood ay ku guuleysato natiijooyin aad u wanaagsan iyada oo aan lagaa helin dadaal yar.
Flickr, nin weyn ayaa hoos u dhacay
Flickr had iyo jeer wuxuu ahaa tixraac markay tahay in lagu kaydiyo sawirrada daruuraha, laakiin tartanka Google iyo adeegyada kale ee lacag la’aanta ah, iyo go’aammada dhawaan la soo saaray ee dhaliyay khalkhalka badan ee adeegsadayaashiisa ayaa ka dhigay inay dib ugu laabato asalka. Adeegga Yahoo wuxuu ku siinayaa 1TB oo lacag la’aan ah (haa, maan qaldamin, 1TB) si aad u soo rarto sawirradaada iyo fiidiyowyadaada. Illaa iyo hadda wax walbaa waxay u egyihiin kuwo hagaagsan, laakiin dhowr bilood ka hor wuxuu go’aansaday in si loo adeegsado arjiga desktop-ka ee isku xiraya maktabadda sawiradaada Flickr, ay tahay inaad lahaato koonto lacag leh, oo ah wax aan cidna ka helin. Bixinta $ 5,99 bishii si loogu isticmaalo barnaamijka desktop-ka waxay umuuqataa runtii mid aan dheelitirnayn, maaddaama awoodda keydinta ay tahay mid aan isbeddelin, iyo inta kale ee adeegyada caymiska ee ay bixiso runtii xiiso uma leh inta badan isticmaalayaasha.
Xitaa sidaas oo ay tahay, waxay leedahay codsi bilaash ah oo loogu talagalay macruufka oo si otomaatig ah u soo geliya sawirrada, markaa haddii waxa aad rabto ay yihiin kaydinta sawirrada iPhone-kaaga markaa tani waa ikhtiyaarka ugu fiican ee aad heli karto. Tayada sawirradu weli isma beddello, oo ka mid ah dalabka laftiisa waad la wadaagi kartaa isticmaaleyaasha kale, ku xafidi kartaa sawirradaada kuwa khaaska ah ama u oggolaan kartaa asxaabtaada ama guud ahaan dadweynaha inay helaan.
Amazon Cloud Drive, mid aan rabo mana awoodo
Adeeggii ugu dambeeyay ee aan ka hadalno dad badani ma oga. Amazon waxay sidoo kale soo bandhigtay fursado keydinta daruurta muddo dheer, iyo kuwa isticmaala Amazon Premium, marka lagu daro ku raaxeysiga maraakiibta bilaashka ah ee alaabooyin badan oo ay iibisay shirkadda weyn ee internetka, waxay lahaan doonaan 5GB oo ah keyd lacag la'aan ah Amazon Cloud Drive, iyo dhammaan sawirrada aad rabto, iyadoon xaddidnayn boosaska, in kasta oo fiidiyowyadu aysan ku habboonayn kiiskan. Sawirada waxaa lagu soo rogay ixtiraamka asalka asalka ah, iyada oo aan la tirtirin ama wax laga beddelin, sidoo kale waxay leedahay codsi desktop ah si looga dhigo wax fudud kumbuyuutarkaaga.
Amazon Cloud Drive waxay u noqon laheyd bedel ku habboon kuwa adeegsada adeegeeda Premium, laakiin taa bedelkeeda barnaamijyadeeda waxyaabo badan oo ay ku hagaajiyaan ayay leeyihiin. Abka desktop-ka kumuujinayo isbedelada aad ku sameyso Sawirada OS X, waa inaad gacanta ku waafajisaa, sidoo kale kumuu dhexgalo Sawirrada sida Google Sawirada. Sawirada Amazon, codsiga loogu talagalay macruufka, ayaa mas'uul ka ah inay si otomaatig ah u soo rarto dhammaan sawirrada aad ku haysato iPhone-kaaga, waxayna leedahay is-dhexgal aan ku siineynin dhammaan shaqooyinkaas uu leeyahay Sawirrada Google, laakiin ugu yaraan si aad u baadho ururinta haa taasi waa in ka badan oo ku filan.
Sawirada Google, inta ka hartay inta badan
Falanqaynta afarta adeeg ka dib, mid walbaa wuxuu yeelan doonaa guuleysteheeda. Way cadahay in Apple oo leh iCloud ay noqon laheyd guuleyste aan lagu muransaneyn ee sahlanaanta isticmaalka, isdhexgalka iyo in la ilaaliyo tayada sawirada oo dhan, laakiin boosku waa wax walba., iyo inaad bixiso wax kale oo adeegyo kale kuugu deeqaan bilaash, in kasta oo cilladaha qaarkood jiraan, waa wax aanu qof kastaa diyaar u ahayn inuu sameeyo. Haddii aan doorano adeegyo bilaash ah, Sawirada Google waa guuleyste shaki la'aan, barnaamijyadeeda desktop iyo aaladaha mobilada, isdhexgalka Sawirada OS X, iyo dhamaan iskuxirkaas, fiidiyowyada iyo gif-yada firfircoon ee ay si otomaatig ah kuu abuureyso . Dabcan, waa inaad aqbashaa qodobbadaas gaarka ah ee Google kuu fidinayo, iyo xaqiiqda ah inay cadaadiso sawirradaada iyo fiidiyowyadaada.
Amazon Cloud Drive waxay lahaan laheyd dhibco badan si ay u noqoto guuleystaha, laakiin waxay ka badan tahay dalabka desktop-ka ee aan macquul aheyn iyo xaqiiqda ah in fiidiyowyadu aysan xad lahayn ay ka jaraan qodobo badan, sidaa darteed waxaa loo weeciyay kaalinta seddexaad. Flickr, adeegga ugu habboon ee kuwa badan, aniga ayaa ah midka ku fadhiya booska afraad sababtoo ah xaqiiqda oo ay tahay inaad bixiso $ 5,99 bishii si aad u awoodo inaad adeegsato barnaamij desktop ah oo si toos ah sawiradayda u soo geliya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » iCloud » iCloud, Sawirrada Google, Flickr, iyo Amazon Cloud Drive: Xagee ku dhejiyaa sawirradayda?
iyo onedrive mise sanduuq?
Ku jawaab blas
Waxaan rabay inaan ka hadlo adeegyada gaar ahaan u heellan soo gelinta sawirrada iyo fiidiyowyada, si aan u soo koobo maqaalka. Sida iska cad waxaad kaloo isticmaali kartaa OneDrive, Dropbox, Box, iwm. laakiin durba waa adeegyo guud.
Dhab ahaan: "Waa iska cadahay in Apple oo leh iCloud ay noqon laheyd guuleystaha cad ee sahlanaanta isticmaalka, isdhexgalka iyo ilaalinta tayada sawirada oo aan dhawrsaneyn"
Waxaan ahaa qof adeegsada sawirrada tufaaxa waxaanan bixiyaa bil kasta cusboonaysiinta adag ee iCloud. Laakiin waxaan isku dayay sawirro google waana ka sahlan yahay, marka lagu daro astaamaha ay bixiso sida weji garashada, ama mashiinka wax lagu raadiyo ee fudud oo xitaa raadiya walxaha ka muuqda sawirrada ... waa naxariisdarro. Ama waxay kaa dhigeysaa montages fiidiyoow otomaatig ah, waxaad si dhab ah ugu maleyneysaa in barnaamijka tufaaxu uu ka fiican yahay barnaamijka google. I rumee, google waa sanado yar ka dib! oo si daacadnimo ah 16 MPx maanta waa in ka badan intii ku filan. Yaanan iloobin in cabirradani sawirradu ay u yaraanayaan si tartiib tartiib ah. Meel aan xadidnayn… barnaamij dhab ah oo tufaax ah ayaa kafiican? I aamin, maahan.
Jawaab Fernando Sola Benítez
Sawirrada Google ee ES, ee ku jira Beesha Google cusub.
Ku soo biir!
Jawaab Toni Cañizares
Waxa gadaal ka riixaya google waa asturnaanta ay ku qaadi karaan sawiradaada oo ay ku sameyn karaan waxay doonaan iyaga, marka laga reebo hadaad leedahay ios inaad cusbooneysiiso waa inaad furtaa arjiga oo aad u dhaaftaa adigoo soo gelinaya sawirada maxaa yeelay asalka 3 daqiiqo kadib jooji inaad soo dejiso, aniga ahaan waxa ugu fiican shaki la'aan icloud haddii aad leedahay ios set waxaad qaadataa sawirro waxaad timaadaa goob wifi ah oo keligood ayaa la soo geliyaa, marka laga reebo asturnaanta ay ku siineyso tufaaxa iyo wax kasta oo aad soo dhigto oo isku tayo ah, haddii ma lihid macruuf iyo haddii ay jiri laheyd doobo ama dood onedrive ii ah.
Kaliya waa in loo furo arjiga iyaga si ay u soo rogaan, marka lagu daro calaamadeynta ay sawirada google ku siiso, laguma siinayo arjiga sawirada cirka leh, iyo mashiinka raadinta? iyo sheekooyinka ay abuurto? iyo xusuusinta maanta oo kale…. Uma laaban doono sawirada icloud hadda ama waalan! Ma siineyso waxtarro isku mid ah iyo wixii ka sarreeya dhammaantood waxay iga dhigeysaa inaan bixiyo bil kasta, kaalay!
Laba ka mid ah oo aad muhiim u ahaa ayaa la waayey, Sony Play Memories iyo Shoebox, oo labaduba aad u wanaagsan oo la mid ah Sawirada Google markii lagu dhex daray Google+
Jawaab Jose David Fierros Reyes
Podcast 7x08: iPhone ama iPhone?